Atao rahampitso 08 aprily 2021 ny fihanianan'ireo sivy mianadahy mpikambana vaovao ao amin'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, hiasa mandritra ny 7 taona.
Aorian'izay dia hiroso amin'ny fivoriana voalohany hisafidianan'izy ireo izay ho filoha.
Ingahy RF no heno hatreto fa tsara toerana, na dia 5 vavy, 4 lahy aza ireo mpikambana.
Velon-taraina ireo marary ao amin'ny CTC-19 Ivato manoloana ny zavatra iainan'izy ireo tamin'ity tapakandro marainan'ny alarobia 7aprily ity.
Nisokatra ary efa nandray marary nanomboka omaly 06 aprily 2021 tamin'ny 07 ora sy 28 minitra hariva.
Ireo mararin'ny Covid-19 maneho "forme modérée", izany hoe ireo maneho fahasemporana ary ilana hampiasaina "concentrateur d'oxygène" no raisina an-tanana eny an-toerana.
Araka ny fandaminana napetraka dia eny amin'ny CSB II no handraisana ireo marary maneho "forme simple", ary eny anivon'ny Hôpitaly lehibe kosa ireo maneho tranga misy fahasarotana na "Forme grave".
Hanambara ireo fepetra mifanandrify aminy mikasika ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ry zareo ao amin’ny fitandroana ny filaminana anio alarobia 7 aprily.
Ao amin’ny Salle d’honneur ao amin’ny Toby Ratsimandrava Andrefan'Ambohijanahary, Antananarivo, no hanaovana izany amin’ny 11 ora antoandro.
Hifandrimbonan’ny Tafika Malagasy sy ny Zandarimariam-pirenena ary ny Polisim-pirenena ny raharaha.
Izy telo tonta ireo mitambatra no mandrafitra ny antsoina hoe EMMO-NAT.
Ny lehiben’ny fibaikoana ny Zandarimariam-pirenena dia ny Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa no mpitarika ny EMMO-NAT, araka ny lalàna manankery.
Maro ireo taraiky tsy tafiditra intsony, na taxi-brousse na fiara manokana.